I-Edzwi 's Haven - Ikhaya Lakho Elikude Nekhaya - I-Airbnb
I-Edzwi 's Haven - Ikhaya Lakho Elikude Nekhaya
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguEdwina
1. Ngaba ukhuseleko yeyona nto iphambili kwindawo oyikhethileyo yokuhlala?
2. Ngaba ukhangela indawo yokuhlala entle enezinto ezinokusetyenziswa ezisemagqabini nezinto ezincinci ezicingwe kakuhle?
3. Ngaba ufuna ukubuka iindwendwe ngendlela esemagqabini ngexesha lokuhlala kwakho?
Emva koko iEdzwi 's Haven yeyona ndawo uyithandayo. Le ndlu intle enamagumbi okulala amabini ikwiiDevtraco Court '(indawo ehonjiswe kakuhle nelawulwa kakuhle) ekwindawo epholileyo kwiNtsapho ye-25, iTema eneengcali ezininzi ibe uziqhayisa ngokhuseleko olufumaneka imini nobusuku.
Ukhuseleko, izinto eziyimfihlo nobuhle ziphakathi kweengenelo eziphambili zokuhlala e-Edzwi 's Haven. Ukongezelela, njengondwendwe, uza kukwazi ukuyisebenzisa yonke indlu nezi zinto zilandelayo ezinokusetyenziswa neenkonzo:
1. Amagumbi okulala aneewodrophu ezifakelweyo
2. Indawo yokuhlala kunye neSofa, iTV kunye neendawo zemidlalo yeqonga ezinendawo yokutyela
3. Ukulungele ukusebenzisa i-intanethi ye-ftrl optic broadband ekhawulezayo
4. Ithivi Yedijithali (DSTV)
5. Ikhitshi elinezixhobo zombane
6. Kufakwe umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kwigumbi lokuhlala nakumagumbi okulala amabini
7. Iifeni zesilingi kwigumbi lokuhlala, indawo yokutyela kunye namagumbi okulala amabini
8. Umatshini wokuhlamba impahla
9. Iitanki ezimbini ezifakiweyo ze-poly
10. Amanzi nombane
11. Amanzi ashushu
12. Indawo yokupaka enokwamkela iimoto eziyi-2
Ummelwane unezi zinto zilandelayo:
1. Iindawo zokuzonwabisa .i.e. indawo yokuzonwabisa enendawo yokudlala yabantwana kunye neGo-Kart Racesrack.
2. Ukhuseleko olufumaneka imini nobusuku kunye nokufikelela
okulawulwayo 3. Izitrato ezikhanya kakuhle
4. Isikhululo Samapolisa
5. Isikhululo Seenkonzo Zomlilo
Umbuki zindwendwe ngu- Edwina
Ndizimisele ukuncokola kancinci neendwendwe ukuze zikwazi ukuba zodwa zize zonwabele ukuhlala kwazo. Nangona kunjalo, ndifumaneka ukuze ndinikele ngenkxaso efunekayo ukuze iindwendwe zikhululeke ngexesha lokuhlala kwazo.
Ukuba kuyimfuneko, ndingakucebisa ngeendawo zabakhenkethi nezonwabisayo ukuba umtsha kulo mmandla.
Ndizimisele ukuncokola kancinci neendwendwe ukuze zikwazi ukuba zodwa zize zonwabele ukuhlala kwazo. Nangona kunjalo, ndifumaneka ukuze ndinikele ngenkxaso efunekayo ukuze iindwend…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Devtraco Courts, Community 25 Tema